रुपन्देही गोली प्रकरण : हत्यारा पहिचान नहुँदा घटना रहस्यमय बन्दै | Ratopati
रुपन्देही गोली प्रकरण
रुपन्देही गोली प्रकरण : हत्यारा पहिचान नहुँदा घटना रहस्यमय बन्दै
सीआईबी र जिल्ला प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान
personतेजेन्द्र के.सी. exploreरुपन्देही access_timeअसोज ६, २०७६ chat_bubble_outline0
बुटवल– रूपन्देहीको रोहिणीमा भएको गोली काण्डबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीका २ वटा टोली खटिएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) को टोली रूपन्देही आएपछि जिल्ला प्रहरी र सीआईबीको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान थालेका हुन् । भदौ २९ गते दिउँसो रोहिणी गाउँपालिका ३ बैकुण्ठपुरमा ओमसतिया गाउँपालिका–५, पठ्खौलीका महेन्द्र कुर्मी चौधरीको गोली हानी हत्या भएको थियो ।
एक हप्तामा प्रहरीले के गर्यो ?
दिउँसौ गोली हानी हत्या भएको एक हप्ता पुग्दासम्म पनि प्रहरीले देखिनेगरी कुनै काम गर्न नसकेको आफन्तको आरोप छ । घटनास्थल भारतसँगको सीमा नजिकै भएकाले भारतबाट आएर लुटपाट गर्ने सक्ने व्यावसायीहरुको भनाइ छ । अर्कोतिर तुलानात्मक रूपमा साना हतियार ल्याउन पनि यो जिल्ला सहज मानिन्छ ।
मृतक कुर्मी चौधरीको हत्या पनि साना हतियार प्रयोगबाट भएको प्रहरीको दाबी छ । दुईजना मोटरसाइलकमा आएर गोली हानेको सीसीटीभी फुटेज प्रहरीले फेला पारेको छ । सीसीटीभीमार्फत गोली हान्ने व्यक्तिको अनुहारसम्म प्रहरीले पहिचान गरेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सीआईबीको टोलीले नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान थालेको बताएको छ । हत्यामा संलग्न भएको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिरहेको तथा विभिन्न स्थानमा गएर सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
जिल्लामा प्रहरी प्रमुख फेरिएको समयमा घट्ना भएका कारण पनि प्रहरीलाई हत्यारा पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने दबाब प्रहरीमा छ । प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर दोषीको खोजी कार्य तीव्र पारेकोे प्रहरी प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ ।
‘हामीसँग भएको सबै क्षमता लगाएर काम गरिरहेका छौँ, प्रवक्ता शाहीले भने, ‘सीसी क्यामेरामा कैद भएको फुटेजबाट पनि अनुसन्धान गरेका छौँ । हामीले छिट्टै हत्यारालाई बाहिर ल्याउँछौँ भन्ने विश्वासका साथ काम गरेको छौँ’, उनले भने । अनुसन्धानका क्रममा भारतीय प्रहरीसँग पनि छलफल र समन्वय भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घट्नाको एक साता भइसक्दा पनि कसैको सूचनाका आधारमा भयो वा लुटेरा आफैले पैसा लुट्न गोली हाने भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । यसबारे पुष्टि नहुँदा घट्ना रहस्यमय बन्दै गएको एक प्रहरीले अधिकारीको भनाइ छ । गोली कसले र किन चलायो ? भन्ने विषय नखुले पनि पारिवारिक बेमेलका कारण चौधरीको हत्या भएको आशङ्का गरिएको छ ।
कुर्मी भदौ २९ गते आइतबार दिउँसो साढे २ बजे भैरहवास्थित हिमालय बैङ्कबाट ५ लाख रूपैयाँ निकालेर लु ९ प ८२३५ नम्बरको मोटरसाइकलमा श्रीमतीसहित घर फर्किंदै थिए । सोही क्रममा उनीमाथि बैकुण्ठपुरमा गोली हानियो । गोली हानेपछि उनीसँग भएको रकम, नागरिकता, चेकबुक लगायतका सामान लगेको परिवारले जनाएको छ ।
मृतक चौधरीको परिवारमा अहिले २ छोरी, एक छोरा, श्रीमती र बुबाआमा छन् । घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै हत्यारामाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बसेका चौधरी पछिल्ला वर्षदेखि गाउँमै बस्दै किसानी गर्दै आएका थिए ।
#रुपन्देही गोली प्रकरण#केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो